Booliska Somaliland oo dilay Wiil Arday ahaa | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Booliska Somaliland oo dilay Wiil Arday ahaa
Booliska Somaliland oo dilay Wiil Arday ahaa
Ardaygaas oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Cabdishakuur oo wax ka baranayey jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ayaa waxaa toogtay askari ilaalo ka ahaa jaamacadda kaddib markii sida la sheegay ay murmeen ardayga dhintay iyo askarigu.
Sida uu BBC-da u sheegay maayarka magaalada Boorama Maxamed Axmed Warsame, toogashada ayaa ka dhacday irridda hore ee laga galo jaamacadda oo uu ku sugnaa askariga wax toogtay.
Ardayga la toogtay ayaa la sheegay in teleefoon uu ku soo ilaaway gudaha jaamacadda, ka dibna uu dib ugu laabtay jaamacadda si uu teleefoonka u soo qaato balse waardiyihii jaamacadda ayaa u sheegay in aan la geli karin jaamacadda oo uu dhammaaday waqtigii waxbarashada, muran ka dibna uu sidaas ku toogtay.
Askarigii falkan toogashada ah gaystay ayaa gacanta lagu hayaa sida ay xaqiijiyeen maamulka magaalada Boorama iyo Maamulka Jaamacadda Camuud ee Magaalada Boorama.
Dhanka kale maayarka magaalada Boorama ayaa beeniyey warar la isla dhex marayey oo sheegayey in ardaygaas loo toogtay in uu xirnaa calanka Soomaaliya iyo sidoo kale wararka kale ee sheegayey in uu jiro dhaawac soo gaaray dhalinyaro la socotay wiilka dhintay.